Hawo xoogaa wasakhaysan waa kordhin karta kansarka sambabada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qiiqa baabuurta. Sawirle: Pontus Lundahl för Scanpix
Hawo xoogaa wasakhaysan waa kordhin karta kansarka sambabada
La daabacay onsdag 10 juli 2013 kl 16.30
Kansarka haleela sambabadu wuxu ka mid yahay noocyada cudurada kansarka ee dunida ugu badan. Sigaar-cabbidda ayaa noqoneysa sababta ugu weyn oo loo qaado kansarka sambabada, in kastoo ay jiraan sababo kale oo hawada la xiriira oo kordhin karta in la qaado cudurkaas.
Khatarta in la qaado kansarka sambabadu waa ay jirtaa xataa haddii wasakhda ku jirta hawada la neefsado ay aad u yar tahay. Sidaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee TT.
Natiijadaanina waxay ka soo baxday daraasad ay qaybqaateen dad tiradoodu gaareyso 313000 oo qof oo Yurub ku nool. Dadka daraasaddaas ka qaybgalayna 40000 oo ka mid ahina waxay ahaayeen iswiidhish.
Caalimiinta daraasadaan sameeyey waxay cabbireen cufnaanta hawada ka jirey meelaha ay dadkaasi degganaayeen. Daraasadoodana waxay ku soo daabaceen wargeyska Lancet Oncology. Dadkii daraasada ka qaybgalay 2095 qof oo ka mid ah ayuu ku dhacay cudurka kansarka sambabada intii ay daraasaddu socotey oo ahayd 13 sano.
Waxyaalaha hawada wasakheeyana waxaa ka mid ah qiiqa gaadiidka iyo habka kuleylinta guryaha. Khatarta in kansar la qaado sidaas uma weyna oo lama barbardhigi karo dhibaatada sigaar-cabbidda, laakiin haddana waa natiijo aan la yareysan karin.